Gmail waxay soo bandhigi doontaa fariimo firfircoon sanadkan | Androidsis
Gmail waa barnaamijka emailka ugu caansan hadda ku jira Android, in kastoo waxaa jira wax yar oo badal ah kuwa danaynaya. Sannadkii la soo dhaafay, abku wuxuu soo bandhigayay hawlo cusub oo lagu siinayo fursado badan dadka isticmaala. Iyaga dhexdooda waxaan ka helaynaa baajinta rarka ama emayllada sirta ah. Waxay u muuqataa in wararka 2019 ay sii socon doonaan inay yimaadaan, sababtoo ah mid ayaa durba aad u dhow.
Waa wax walba oo ku saabsan farriimaha firfircoon, kaas oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu si qoto dheer ula falgalo waxa ku jira iimaylka. Muuqaalkan cusubi wuxuu durbaba diyaarinayaa inuu soo galo Gmail waxyar kadib. Haatan, waxaa lagu tijaabin karaa beta-ka barnaamijka boostada ee Google.
Fikradda leh farriimaha noocan ah ee cusub, oo dhawaan lagu soo bandhigi doono barnaamijka, ayaa ah in dadka isticmaala ay aadaan awood u leedahay inaad ku dhex socoto isla emailka, adigoon u baahnayn inaad ka baxdo Gmail waqti kasta. Tani waa wax lagu gaaro mahadnaqa AMP, kaas oo doonaya inuu soo bandhigo waxa loogu yeero kacaan emaylka. Shaki la’aan hawl kale oo si fiican u adeegsanaysa barnaamijka.
Horeba sanadkii hore muuqaalkan cusub waxaa lagu soo bandhigay shir. Ugu dambeyntiina, astaamahan ayaa hadda lagu hirgeliyay barnaamijka emaylka ee shirkadda Mareykanka. AMP lafteeda ayaa sheegaysa in ujeedada ugu weyn ee mashruucani ay tahay emaylka ka dhig mid firfircoon. Laga soo bilaabo waqtigan xaadirka ah, si aan ula macaamilno nuxurka farriinta ay noo soo direen, adoo gujinaya oo sugaya farriinta la yiri.
Iyadoo AMP ay ku socoto Gmail, xaaladdu way is beddeli doontaa. Maaddaama waxyaabaha si toos ah looga cusbooneysiin doono Gmail lafteeda. Markaa haddii aad hesho emayl xiriir la leh degel websaydh ah, mahadsanid soo bandhigida AMP, adeegsadaha waxaa loo oggol yahay inuu booqdo shabakadda, badbaadiyo sawirrada ama fuliyo dhammaan noocyada ficillada, looma baahna inaad ka tagto boostada ama gal bogga.
Tani waa rar waqti-dhab ah. Maxaa intaa ka badan, animations-ka ayaa la filayaa inuu ka fiicnaado mar walba. Marka xitaa emayllada leh sawirro badan oo lifaaqan, waayo-aragnimada adeegsaduhu waxay ku fiicnaan lahayd Gmail. Maxaa u oggolaan doona adeegsi wanaagsan markasta adeegsadayaasha. Isbedelo badan, oo dabcan macnaheedu noqon karo kacaankii laga filaayay adduunkan e-mayl.
Farriimaha firfircoon ee ku jira Gmail
Imaatinka farriimahan firfircoon ee Gmail waa inaysan qaadan waqti dheer inay dhacaan. Sababtoo ah xilligan, waxay bilaabeen in mar horeba la tijaabiyo. App ayaa leh lagu soo bandhigay nooca v8.12.30.228577460. Marka tijaabooyinkii ugu horreeyay ee muuqaalkan horeyba loo bilaabay. In kasta oo Google lafteeda aysan waxba ka oran, laakiin horey ayaa loo arkay, sida ay maanta muujiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka.
Tani waxay ka dhigan tahay in safarka AMP ee Gmail uu durba yahay xaqiiqo oo uu bilaabmayo. Waxa aynaan ogeyn xilligan waa marka farriimahan firfircoon lagu soo bandhigi doono barnaamijka boostada Google ee loogu talagalay Android si rasmi ah. Tijaabooyinkii ugu horreeyay waxay bilaabeen, markaa waxay qaadanaysaa dhowr bilood in wax walboo sifiican u shaqeeyaan. Waxay sidoo kale kuxirantahay hadii cilad la helo. waan ogahay rajeynayaa in sanadkaan oo dhan ay rasmi noqon doonaan ku jira barnaamijka.
Nasiib darrose ma hayno xog dheeri ah oo tan ku saabsan. Waxay u badan tahay inay imaan doonaan oo ay weheliso isbeddelka naqshadda qorshaysan loogu talagalay Gmail inta lagu jiro sanadka 2019. Tan iyo markii la sheegay bilo in abku uu heli doono interface cusub. Waad ku mahadsan tahay, waxaa la filayaa inay awood u leedahay inay sifiican uga faa'iideysato. Hadda ma hayno xog ku saabsan imaatinka nashqadda cusub ama farriimaha firfircoon. Waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan xog ka helno arrintan. Maxaad u malaynaysaa qaabkan cusub ee imanaya barnaamijka sannadkan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Gmail waxay isu diyaarineysaa imaanshaha fariimaha firfircoon. Maxay yihiin iyo maxay u yihiin?